1. पर्वतारोहण झोला दुई प्रकारका: एउटा ठूलो झोला हो जसको भोल्युम 50-80 लीटर हुन्छ। अर्को 20-35 लिटर बीचको भोल्युम भएको सानो झोला हो, जसलाई "आक्रमण झोला" पनि भनिन्छ। ठूला पर्वतारोहण झोलाहरू मुख्यतया पर्वतारोहणको क्रममा आरोहण सामग्रीहरू ढुवानी गर्न प्रयोग गरिन्छ, र साना पर्वतारोहण झोलाहरू सामान्यतया उच्च-उचाई आरोहण वा आक्रमण चुचुराहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। पर्वतारोहणको लागि ब्याकप्याक चरम वातावरणसँग सामना गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो उत्कृष्ट र अद्वितीय बनाइएको छ। शरीर सामान्यतया पातलो र लामो हुन्छ। झोलाको पछाडि मानव शरीरको प्राकृतिक वक्र अनुसार डिजाइन गरिएको छ। यस प्रकारको झोला वाटरप्रूफ छ, त्यसैले यो भारी वर्षामा पनि चुहावट हुँदैन। थप रूपमा, पर्वतारोहण झोलाहरू पर्वतारोहणका अतिरिक्त अन्य साहसिक खेलहरू (जस्तै र्याफ्टिङ, मरुभूमि पार गर्ने आदि) र लामो दूरीको यात्राहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
2. ठूलो यात्रा झोला पर्वतारोहण झोला जस्तै छ तर शरीरको आकार फरक छ। ट्राभल झोलाको अगाडि जिपरले पूर्ण रूपमा खोल्न सकिन्छ, जुन चीजहरू छनोट गर्न र राख्नको लागि धेरै अनुकूल छ। पर्वतारोहण झोलाहरू विपरीत, जसले सामान्यतया झोलाको माथिल्लो आवरणबाट वस्तुहरू झोलामा राख्छ। भित्र। त्यहाँ धेरै प्रकारका साना ट्राभल झोलाहरू छन्, त्यसैले तपाईंले आरामदायी एउटा रोज्नुपर्छ, न केवल उपस्थिति।
3. विशेष साइकल झोलाहरू दुई प्रकारमा विभाजित छन्: झोला प्रकार र ब्याकप्याक प्रकार। झोला तपाईंको पछाडि बोक्न सकिन्छ, वा तपाईंले झोलालाई साइकलको अगाडिको ह्यान्डल वा पछाडिको शेल्फमा झुण्ड्याउन सक्नुहुन्छ। ब्याकप्याक प्रकार मुख्यतया साइकल यात्राहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ जसलाई उच्च-गति साइकल चलाउन आवश्यक छ। साइकलको झोलामा रिफ्लेक्टिभ स्ट्रिपहरू छन् जसले रात्रि सवारीको समयमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बत्तीहरू प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ।
4. ब्याक फ्रेम झोला यस प्रकारको झोलामा झोलाको बडी र बाहिरी एल्युमिनियम मिश्र धातु फ्रेम हुन्छ। यो आकारमा ठूला र ब्याकप्याकमा प्याक गर्न गाह्रो हुने वस्तुहरू बोक्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै फोटोग्राफी बक्स। थप रूपमा, धेरै ब्याकप्याकहरूले संकेत गर्दछ कि कुन खेलहरू तिनीहरूका लागि उपयुक्त छन् संकेतहरूमा।
अघिल्लो:ब्याकप्याक मर्मत सामान्य ज्ञान।